Imfucumfucu yeCocoa enjengezithelo ze-cocoa izithelo kanye namagobolondo kabhontshisi we-cocoa angavezwa kalula ngokukhipha ibhotela le-cocoa, ushukela wezithelo kanye nama-bioactive compounds. Isizinda se-Ultrasonic siboniswe ukuthi siyindlela esebenza kahle kakhulu yokuhlukanisa izinto ezibalulekile kudoti wecocoa. Ama-ultrasonic extractors akhipha isivuno esikhulu samakhemikhali ebanga lokudla kusuka kukhokho wekhokho, amagobolondo nezithelo zomuthi ngaphakathi kokwelapha okusheshayo, okuphephile nokulula.
Ukhokho (Theobroma ukhokho L.) isitshalo esibaluleke kakhulu, okusetshenziswa ubhontshisi ikakhulukazi ekukhiqizeni ushokoledi. Ngemuva kokuvuna ama-cocoa pods, kungaba ngaphambi noma ngemuva kokuwosa ubhontshisi we-cocoa, ubhontshisi uyadedelwa kumagobolondo (awaziwa nangokuthi ama-hulls noma amakhoba) kanye ne-izithelo pulp. Amagobolondo e-cocoa kanye ne-cocoa izithelo pulp kubhekwa njengomkhiqizo womkhakha wecocoa. Ngokuya ngezinhlobo zezithelo zikakhokho, ubhontshisi wakha cishe. 25% wt. yezithelo zikakhokho. I-pulp inikela kwenye i-25% wt. okunye igobolondo / ikhoba, elilahlwa kakhulu njengemfucuza. Kodwa-ke, imikhiqizo eyenziwe ngococoa njengamagobolondo noginingi icebile ngemicu, ama-antioxidants, ama-polyphenols, ama-flavour compounds, ushukela nama-lipids, angasetshenziswa njengezithasiselo ekudleni naseziphuzweni.
ultrasonic isizinda uhlelo I-UIP2000hdT wokucubungula ukhokho ngomkhiqizo. Isizinda se-Ultrasonic sikhipha ama-antioxidants, ama-polyphenols nama-flavonoid avela kumagobolondo e-cocoa.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Phyto-Nutrients kusuka ku-Cocoa Shells
Isizinda se-Ultrasonic Cocoa Shell: Isizinda se-Ultrasonic siguqula i-cocoa biowaste (isb., Ikoko le-cocoa, i-pod husk) ibe yimikhiqizo yokudla ebaluleke kakhulu efana nebhotela le-cocoa, ama-flavour compounds, i-phyto-nutrient, izithelo zikashukela, nemicu yokudla. Ngenqubo ekhishwa kahle ye-ultrasonic, kudingeka kuphela ukwelashwa okungafakwanga ngokweqile kwegobolondo le-cocoa shell biomass, okungukuthi, ukugaya igobolondo le-cocoa.
I-Power Ultrasound Yokukhipha
Umshini wokuqinisa amandla we-ultrasound ubangelwa ikakhulu yisimo se-acoustic cavitation. I-Ultrasonic cavitation ibangela ukushayisana phakathi kwezinhlayiya ze-cocoa shell / husk, okuholela ekuhlukaneni okwehlukile nokuncishiswa kosayizi wezinhlayiyana. Lapho ama-bubble e-cavitation ewa ebusweni bezinto eziqinile ze-cocoa, ukuguguleka komhlaba kanye nokukhiqizwa kabusha kukhulisa indawo yezinhlayiyana ngokuqhubekayo. Ngakho-ke ukuqiniswa kokudluliswa okukhulu kusiza ukukhululwa kwama-molecule afana namaprotheni, i-lipids nama-phyto-chemical. Amandla e-shear akhiqizwa nge-Ultrasonically athuthukisa ukungena kwe-solvent ku-matrix yeselula yendaba yezitshalo futhi kuthuthukise ukutholakala kwezingqamuzana zeseli, ngokulandelana. Lezi zinqubo zamandla we-ultrasonics zibhekele inqubo yokuqinisa ebaluleke kakhulu etholwayo lapho i-ultrasonication isetshenziselwa ukukhishwa kwe-botanical.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Extractors zeCocoa Waste Processing
Ukukhishwa Kwe-Cocoa Shell Isizinda Esifakazelwe Ngocwaningo
UGrillo et al. (2018) uphenye ukukhishwa kukabhotela kakhokho, ama-polyphenols (isb. I-catechin, i-epicatechin, i-procyanidin dimers, ama-trimers nama-tetramers), ama-antioxidants kanye ne-methylxantine (isb. I-caffeine, i-theobromine) kusuka kumagobolondo kabhontshisi we-cocoa esebenzisa isizinda se-ultrasonic. Njengoba ithebula elingezansi likhombisa, i-ultrasonication ihlale ikhuphula izithelo zombili ze-lipophilic kanye ne-hydrophilic okuholela ekukhishweni okunothe ngama-antioxidant flavanols (amakatekini nama-epicatechins), i-theobromine (32.7 ± 0.12 mg / g amagobolondo), i-caffeine (1.76 ± 0.08 mg / g amagobolondo) kanye cocoa ibhotela, ngendlela elula futhi elula. Imiphumela emihle kakhulu ngaphansi kwe-sonication ifinyelelwe kusetshenziswa ingxube ye-ternary, enikeza ukubuyiswa kwengxenyenamba ye-hydrophilic ephansi kancane futhi inikeza ukuncipha okuphindwe ka-16 esikhathini sokukhipha.
Isizinda esisiziwe se-Ultrasound (i-UAE) kanye nenqubo ejwayelekile yezithelo ezivela kumagobolondo e-cocoa aluhlaza, avezwe njengephesenti le-w / w. Isizinda se-Ultrasonic sinika isivuno esikhulu kakhulu
Study and copyright ngu UGrillo et al. 2019.
Yusof et al. (2019) kungabonisa ukusebenza kahle kokukhishwa kwe-ultrasonic kwama-flavonoid kusuka kugobolondo le-cocoa, futhi. Bathole ukulandela imingcele yokukhishwa kwe-ethanol okuhlushwa, izinga lokushisa, nesikhathi se-ultrasonication esebenza kahle kakhulu, okusho ukuthi ngaphansi kwezimo ezilandelayo kutholwe isivuno esikhulu kakhulu: inani eliphakeme lokuqukethwe okuphelele kwe-flavonoid (TFC; 7.47 mg RE / g isisindo esomile (DW)) kufinyelelwe Ukuhlushwa kwe-ethanol engu-80%, ukushisa kwenqubo ye-55ºC, kanye ne-sonication engama-45 min.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonic Extractors yokuCubungula kweMfucuza yeCocoa
Amasistimu wokukhipha we-ultrasonic aphezulu avela ku-Hielscher Ultrasonics asetshenziswa emhlabeni wonke ku-R&D, amancane, usayizi ophakathi nendawo kanye namazinga wokukhiqiza athengisa ngokuphelele. Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonic okuqinisa inqubo yokukhipha futhi kukhulise isivuno kanye nokusebenza kahle kokukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu. I-Hielscher Ultrasonics inikela ngemishini yokukhipha noma yimuphi umthamo wevolumu / wenqubo. Ukuba nesipiliyoni kokukhishwa kwe-botanical iminyaka engaphezu kwengu-25, i-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho omethembayo wokukhipha okuphezulu kwe-ultrasonic!
Izici ezihlakaniphile zama-Hielscher ultrasonicators zenzelwe ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile, imiphumela yokuzala kanye nobungani bomsebenzisi. Amasethingi wokusebenza angafinyeleleka kalula futhi ashayelwe ngemenyu enembile, engatholakala nge-digital color touch-display nange-remote control yesiphequluli. Ngakho-ke, zonke izimo zokucubungula ezinjenge-net energy, amandla aphelele, i-amplitude, isikhathi, ingcindezi nokushisa kuqoshwa ngokuzenzakalela ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyekeze futhi uqhathanise ukuqhutshwa kwangaphambilini kwe-sonication futhi ukwandise inqubo yokukhipha ubhontshisi wegobolondo le-cocoa ukuze isebenze kahle kakhulu.
Xhumana nathi manje ukuze ufunde kabanzi ngokukhishwa kwe-ultrasonic kwama-polyphenols, ama-antioxidants, ushukela kanye nebhotela le-cocoa kusuka kumikhiqizo ye-cocoa. Singajabula ukukuthumela imininingwane mayelana nezinhlelo zethu zokukhishwa kwe-ultrasonic kanye namanani entengo! Abasebenzi bethu abanolwazi oluningi bazokujabulela ukuxoxa nawe ngezidingo zakho zokufaka isicelo nokucubungula!